उत्पादकत्व रहस्य: टेक्नोलोजी जहिले पनि टेक्निकल हुँदैन Martech Zone
उत्पादकत्व रहस्य: टेक्नोलोजी जहिले पनि टेक्निकल हुँदैन
शुक्रबार, अप्रिल 16, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। रबी स्लटर
मैले स्वीकार गर्न पाएँ, चार अक्षर TECH ले मलाई बाली दिनुहोस्। शब्द "प्रविधि" व्यावहारिक रूपमा एक डराउने शब्द हो। जब हामी यो सुन्छौं, हामी या त डराउँछौं, प्रभावित वा उत्साहित। विरलै हामी टेक्नोलोजीको उद्देश्यमा केन्द्रित छौं: जटिलताहरूलाई बाहिरबाट फर्किने गरी हामी अधिक कार्य गर्न सक्दछौं र रमाइलो गर्न सक्दछौं।
मात्र सूचना प्रविधि
तापनि यस शब्द प्रविधि ग्रीक शब्दबाट आएको हो प्रविधि, "शिल्प" को अर्थ, यी दिनहरू हामी प्राय जसो स .्केत गरिरहेका छौं सूचना प्रबिधि। को पाठकहरु Martech Zone यस क्षेत्रको धेरै विलक्षणता मा खडा छन्। हामी टोलीका रूपमा URL, SEO, VoIP र PPC जस्ता टस गर्छौं। हामी बिभिन्न उत्पादनहरू, सेवाहरू र उद्योगहरूको बीचमा ठूला तुलना गर्छौं जुन अन्यथा असंबंधित जस्तो देखिन्छ। टेकको संसार यति धेरै हलचलले भरिएको छ कि मानिसहरूले सम्मेलनहरूमा के भनिरहेछन् भनेर बुझ्न असम्भव छ। तपाईं "टेक्नोलोजी" मा हुनुहुन्छ भन्नेले केही मानिसहरूलाई टाढा डराउन सक्छ।
टेक्नोलोजी र प्रविधिको बिच
टेक्नोलोजी र टेक्नेलाइटीहरू बीच अन्तरको संसार छ। टेक्नोलोजी वैज्ञानिक अवधारणाको व्यावहारिक अनुप्रयोग हो उपयोगी वा चाखलाग्दा परिणामहरू उत्पादन गर्न। प्राविधिकता धेरै विवरणहरू हुन् जुन प्रविधि काम गर्दछ। स्पष्ट गर्न: यो महत्त्वपूर्ण छ कोही तपाईंको कारमा ईन्जिन समस्याहरू कसरी पत्ता लगाउने भनेर जान्दछ, तर अटोमोबाईल टेक्नोलोजीको मजा लिन तपाईंले मेकानिक हुनु आवश्यक पर्दैन।
त्यसो भए के हुन्छ? मेरो सिद्धान्त यहाँ छ:
सुरुमा हामी मध्ये कसैलाई पनि यो थाहा हुँदैन कि यो के हुने छ। र त्यसपछि एक दिन, बाम, तपाईले सुन्नुभयो कि गुगल, फूड नेटवर्क र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले प्रतिस्पर्धी एरुगुला खेतीका लागि अनलाइन सामाजिक नेटवर्क सिर्जना गर्न सेनामा सामेल भइरहेको छ।
अचम्म मान्नुपर्दैन, हामी तत्काल चीजहरू किन्न सक्दैनौं। साँच्चै? म के गर्न जाँदैछु कि उपकरणमा किबोर्ड छैन? हामी आफैलाई सोध्छौं, मलाई मेरो तर्फबाट टेक्स्ट सन्देशहरू पठाउन मेशिन किन चाहिन्छ जसले शरीरको भाषा प्रयोग गर्दछ?
यी प्रश्नहरू, तथापि, केहि प्राविधिक समझ आवश्यक छ। हामीले कम्तिमा नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आफैंलाई कल्पना गर्नुपर्दछ, र यसले हाम्रो आफ्नै जीवनमा कसरी काम गर्दछ भनेर केही ज्ञान छ।
आविष्कार वा डर
जब टेक्नोलोजी अधिक प्रबल हुँदै जान्छ, हामी सडकको काँटामा आइपुग्छौं। या त हामी गर्न सक्छौं यो प्राप्त गर्नुहोस् आविष्कारको फ्ल्यासमा (ओह! म फेसबुकमा पुराना साथीहरूसँग राख्न सक्दछु। Cool!) वा यसले हाम्रो दिमागमा वास्तवमै क्लिक गर्दैन। टेक्नोलोजीले हामीलाई पास गर्न थाल्छ, र हामी डराउँछौं कि हामी वरिपरिको संसारका लागि "पर्याप्त स्मार्ट" छैनौं।
(चित्रमा छैन: प्रविधि हामी पाउँछौं तर यसको मतलब गर्दैन। उदाहरण को लागी, आईफोन अनुप्रयोग जसले शर्मनाक शारीरिक आवाज गर्दछन्।)
कहिलेकाँही हामी नयाँ टेक्नोलोजीको प्राविधिक विवरणहरूमा अस्वाभाविक हुन्छौं र हामी यसलाई टाढा लैजान र आफ्नो सामर्थ्य देखाउन चाहन्छौं। म यो पोस्ट लेख्न को लागी Martech Zone, म कच्चा HTML मा त्यसो गर्न को लागी र मेरो आफ्नै मार्कअप ट्याग जोड्नुहोस्। प्राविधिक प्रवाह हो रमाइलो, किनभने म त्यसो गर्न पर्याप्त विज्ञ हुँ।
कहिलेकाँही हामी टेक्नोलोजीमा पर्याप्त सक्षम हुन्छौं, कसरी प्राप्त गर्ने भनेर जान्नको लागि पर्याप्त कुरा। तपाइँ साच्चिकै बुझ्नुहुन्न कसरी टच स्क्रिनले कार्य गर्दछ, तर थोरै अभ्यास र सान्त्वनाको साथ तपाईं यसलाई ठीक प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
कहिलेकाँही टेक्नोलोजी निराश जटिल देखिन्छ र हामीलाई पार गर्दछ। यो सबै स्थानहरूमा सब भन्दा चिन्ताजनक हो किनभने कसैलाई यो पहिचान गर्न मद्दत गर्न गाह्रो छ कि यदि उनीहरूले केवल थोरै प्राविधिक विवरणहरू बुझेका थिए (जस्तै खोजी बाकस र ठेगाना पट्टी बीचको भिन्नता), तिनीहरू धेरै उत्तम हुन्छन्।
तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ
मान्यता पाउनुहोस् कि तपाईले भेट्नु भएको प्रत्येक चीज टेक्नोलोजी कग्निशन चार्टको साथ कुनै खास नयाँ गिज्मो, प्रणाली वा ग्याजेटको लागि छ।
उनीहरूलाई लैजान चाहानु भएको दिशामा जानको लागि मद्दत गर्नुहोस् (योग्यता वा विशेषज्ञता तिर), छैन तपाईले चाहानु भएको।
डिजाइन टेक्नोलोजी र मार्केटि campaigns अभियान दिमागमा प्रत्येक भूमिकाको साथ। बजार मानिस जहाँ छन्, होईन जहाँ तपाईंलाई लाग्छ तिनीहरू हुनुपर्छ!
तिम्रो के बिचार छ? के व्यक्तिहरू टेक्नोलोजी कग्निशन चार्टमा देखाईएका मार्गहरू बाँचिरहेका छन्?
टैग: अपनाउनेपरम आनन्दनिर्णयाधिकारहारखोजविशेषज्ञडरअज्ञानताउत्पादकतासंदेहप्राविधिकताप्रविधि अनुभूति
जब नयाँ साइट डिप्लोय गर्दै: दुई पटक मापन गर्नुहोस्, एक पटक काट्नुहोस्